နေ့: အောက်တိုဘာလ72019
အဆိုပါ Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကတည်ဆောက်လိမ့်မည်သည့် Apple, ထိုဘတ်စ်ကား Terminal နှင့်စီမံကိန်း၏မြေပြင်အလုပ်နှင့်အခြေခံအုတ်မြစ်တူးဖော်စတင်ခဲ့သည်။ solar ပြား၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လျှပ်စစ်မီးထုတ်လုပ်တံ့သော terminal ကို၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရှုထောင့်မှကျေးဇူးတင်စကားလည်းထွက်ရပ်။ Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် Elmali သစ်ကို [ပို ... ]
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ယာဉ်အသွားအလာများစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနကြီးကြပ်မှုနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး၏နိယာမနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာ (NLA ငါ) ၏ဦးစီးဌာန,7/ 24 အတွင်းနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာသုံးစက်ကိရိယာများနှင့်အတူတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အဓိကအချက်မှာနေရာချကင်မရာများစဉ်ဆက်မပြတ်, နိုင်ငံသားများအနေဖြင့်အကြောင်းကြားစာစောင့်ကြည့်တွေနဲ့ [ပို ... ]
သဘာဝနှင့်ဝေးစိတ်ဖိစီးမှုကနေအချိန်ဖြုန်းလိုသောကြောင့်အကြီးအစိတ်ဝင်စားမှုကိုမြင်လျှင်, ထိုတောရိုင်းပန်းခြံ Ormanyan တည်ခင်းဧည်ရာပြည်ပကနေများနှင့် Kocaeli ၏အိမ်နီးချင်းပြည်နယ်များအပြင်ဘက်အများအပြားဧည့်သည်များ။ စည်းလုံးမှုအဖြစ်တူရကီကနေဧည့်သည်များနှင့်ကမ္ဘာ၏နေ့ Ormanian [ပို ... ]
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကသူတည်ဆောက်လမ်း, ထိုကဲ့သို့သောမြေပေါ်နှင့်လမ်းဆုံအဖြစ်စီမံကိန်းများ beautification နှင့် Landscaping လစျြလြူရှုမထားဘူးပြီးသွားပြီးနောက်ဤဒေသရှိ။ ပန်းခြံများနှင့်ဥယျာဉ်နှင့်အချောစီမံကိန်း၏စိမ်းလန်းဧရိယာဦးစီးဌာနအစိမ်းရောင်နေရာများနှင့်ရောင်စုံချစ်ပ်ရန် [ပို ... ]
များစွာသောပြည်နယ်များအနေဖြင့်တူရကီရဲ့အများအပြား Demiryolc ကလေးများအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ, Selcuk Aydin မြို့မြို့ summerhouse အတွက်မီးရထားပြတိုက်မှာတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူတို့လူမှုမီဒီယာအုပ်စုတစ်စုအပေါ်ကိုဖန်တီးဖို့အမြိုးသားအအကြောင်းကို Demiryolc အတွက် 200 လူများ, 40 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ပတ်သက်. summerhouse ရေနွေးငွေ့စက်ခေါင်းပြတိုက်အတွက်ဖြည့်ဆည်း [ပို ... ]
ပိုပြီးရက်ပေါင်းဖြစ်လာခဲ့သည် ... 15 14 အဝေးပြေး Bursa တဲ့ကာလ task ကိုရောက်လေ၏။ ဒေသဆိုင်ရာဒါရိုက်တာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်, ဖုန်းပေါ်မှာ chatting နေချိန်မှာယခု TCDD Özgür'lအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေများအတွက်လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာအဖြစ်သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတာဝန်ယူစတင်အကြံပြုချက်များ, ငါတို့မေးမွနျး: "အနှစ်, [ပို ... ]
တရုတ်ယနေ့မကြာသေးမီလများတွင်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားရှေ့ပြေးပုံစံ၏အတော်လေးဟာပြန့်ပွား Maglev ရထားများအတွက်မိတ်ဆက်မလြော့စစ်ဆင်ရေးဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်တွင်ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်စောစော xnumx'n တှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်။ တရုတ်, ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးအပေါ်မြန်နှုန်းအထိအမြဲအတူစွဲလမ်းနေတဲ့တိုင်းပြည် [ပို ... ]
high-မြန်နှုန်းရထားလက်မှတ်ခများဘာ့ဂ်မှ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီးဌာနဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာယေဘုယျမန်နေဂျာကကမ်းလှမ်းန်ဆောင်မှုအားဖြင့်ချိတ်ဆက်နှင့်xnumx'şရာခိုင်နှုန်းခန့်တိုးလာသည်။ ပထမဦးဆုံးရှင်းပြချက်အဝေးပြေး၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုထံမှလာ၏။ ယနေ့ထံမှထိရောက်သောဖြစ်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများနှင့်တံတားများ, [ပို ... ]
Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်းကိုမေးခွန်းတစ်ခုကိုသင်အခုငါ့ထံသို့ လာ. အဘယ်အရာကိုပဲ! Kızılcıhamamမှာန်ကြီးချုပ် Recep Tayyip အာဒိုဂန်ကနောက်ဆုံးမိနစ်အမိန့်။ Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်သင်ဤလွန်းသွားပြီ, သူတို့ကဆိုသညျကား, စီမံကိန်းမပွုနိုငျသညျ။ Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်ချက်ချင်းစီမံကိန်းစတင်ရန်ညွှန်ကြားလာ၏။ CHP ဆက်လက်ရှိ [ပို ... ]
ထိရောက်သော7ဖြစ်ရန်အတွက်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးနှင့်တံတားဖြတ်သန်းခအနေဖြင့်ယနေ့ကနေအဝေးပြေး၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု (KGM) (အောက်တိုဘာလ 20) ပျမ်းမျှအချိန်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလ720 ထံမှအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ပျမ်းမျှရာခိုင်နှုန်းအဝေးပြေးနှင့်တံတားဖြတ်သန်းခ [ပို ... ]
အခန်းရှိရာ Sakarya အင်ဂျင်နီယာများနှင့်တွဲဖက်ဗိသုကာအတွက်ကိုယ်စားလှယ်များ, လူထုအစီအစဉ်အပေါ်တစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့အလေလံကာလအတွင်းယခင်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် Kirkpinar ရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကို Sapanca Sapanca မြူနီစီပယ်အတွက်ကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကိုဆောင်ရွက်ရန်သူကိုကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့တယ်။ Bursa Cableway လေလံအနိုင်ရ [ပို ... ]
ရထားကနေ Marmaray ရေးခွ (အများပြည်သူဒိုမိန်းသို့မဟုတ် လုပ်. အများပြည်သူနယ်ပယ်ရုပ်ပုံသို့မဟုတ်စာဖြင့်ရေးသားစာသားကို) နူးညံ့သန့်ရှင်းရေးအတှကျအဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က "Marmaray မော်တော်ကားစောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှု: Marmaray စီမံခန့်ခွဲမှုညွှန်ကြားမှုရဲ့ကြေညာချက်ဟာတရားဝင်ပြန်တမ်းတစ်ခုကြော်ငြာကဆိုပါတယ် [ပို ... ]
မီလန်တွင်ကျင်းပခဲ့သော Anatolian မီးရထားစနစ်များ Cluster (ARUS) ၏ဥရောပမီးရထားစနစ် (ERC) စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ပြည်ထောင်စု, အီတလီ Ferroviaria ရထားလမ်းစနစ်တရားမျှတမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ Anatolian မီးရထားစနစ်များ Cluster ညှိနှိုင်းရေးမှူးဒေါက်တာ İlhami Pektas ဖန်ဆင်းတဲ့ကြေညာချက်မှာတော့; "မီလန်, အီတလီ [ပို ... ]
နှင်းလျှောစီးရေးစင်တာများတွင်ဆက်လက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရာသီညွှန်ပြ Yedikuyu နိုင်ငံတော်သမ္မတGüngör "ဟုအဆိုပါဒေသတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့၏ဧည့်သည်များရောင်းအားပိုမိုလျောက်ပတ်သောဝန်ဆောင်မှုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်အသစ်သောအိမ်များကိုတည်ဆောက်နေကြတယ်အရက်သောက်ဖွဲ့စည်းပုံ၏အစားအစာစားခြင်းတစ်ခုမမှန်လမ်းအတွက်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့တော်ရဲ့ဒေသဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များမြှင့်တင်ရေးအတွက်အသစ်စက်ရုံ [ပို ... ]
IMM, ဒီနံနက် Metrobus မတော်တဆမှုနှင့် ပတ်သက်. စုံစမ်းစစ်ဆေးစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အခြေအနေကအနီးကပ် 13 ပေါ့ပေါ့ဒဏ်ရာရခရီးသည်ကုသစောင့်ကြည့်လျက်ရှိသည်။ ယာဉ်မတော်တဆမှု IETT tools များ "အစောပိုင်းသတိပေးစနစ်" ၏ထပ်မဖြစ်အောင်လျှော့ချဖို့ထိုသို့သောပို့ချအရေးကြီးသောအလုပ်ကောင်းစွာဝတ်ဆင်ပါလိမ့်မယ်။ [ပို ... ]
သူတို့ဆိပ်ကမ်းနှင့် Antalya တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာအကြား Antalyaspor အားကစားကွင်းတစ်လိုင်းပြေးရထားစီစဉ်ဖျော Cem Oguz, "ကျွန်တော်တို့ဟာရှိအရင်းအမြစ်များမြေအောက်ရထားအစီအစဉ်ကိုရှာတွေ့သည်အထိ Kundu အားကစားကွင်း၏ 16 ကီလိုမီတာအပိုင်းန်းကျင်လူး," ဟု၎င်းကပြောသည်။ Antalya တွင် Oguz,-Hop [ပို ... ]